डा.केसी भन्छन प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्छ ,, – Ranga Darpan
डा.केसी भन्छन प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्छ ,,
रङ्ग दर्पण सम्वाददाता	 प्रकाशित मिति: Jan 25, 2019
माघ,११ काठमाडौं – अनसनरत डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका छन् ।प्रतिनिधिसभाले चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पास गरे लगतै पत्रकार सम्मेलन गरेका डा. केसीले प्रधानमन्त्री नैतिकताबाट च्यूत भएको भन्दै राजीनामा माग गरेका हुन् ।
आफ्नै निर्णयबाट विचलित भएकाले उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो’ उनका सहयोगी जीवन क्षेत्रीले भने ।
डा. केसी १७ औं दिनदेखि अनसनरत छन् र उनको तर्फबाट क्षेत्रीले नै लिखित वक्तव्य पढेका थिए । आफूसँग भएको सहमति विपरित विधेयक पास भएको भन्दै डा. केसीको विज्ञप्तिमा यो जनतामाथि नै धोका भएको उल्लेख गरिएको छ ।
डा. केसीले अनसन फिर्ता लिएर विधेयक कार्यान्वयन गर्न सरकारले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरेका छन् र आमरन अनसन कायमै राख्ने बताएका छन् ।डा. केसीका सहयोगी क्षेत्रीले सबै माग पुराभएको भन्ने सकार र सत्तारुढ दल नेकपाको दाबी खण्डन गरे ।
जन्ती बोकेको बसमा करेन्ट लगदा ९ जनाको मृतु ३० भन्दा बढी घाइते